7 sharci oo lagu hagaajinayo qoraalkaaga qalabka mobilada | Abuurista khadka tooska ah
Kuwani waa 7 xeerar fudud inaad isticmaasho marka aad u isticmaaleyso nooc ka mid ah font ee mashruucaaga ama mashruuca macmiilka iyo in si fiican loogu arko taleefanka gacanta.
1 Meel bannee
2 Hel cabirka
3 Dabci oo adke
4 Raadi barta macaan
5 Ha lumin dharkaaga
6 Iska yaree farqiga
7 Ku hagaaji raadinta miisaanka
Waxaa jira a kala sarayn dheeraad ah oo saameyneysa qulqulka xariiqa ama tuduca oo ku saabsan yahay kala saraynta meelahaSi kale haddii loo dhigo, booska u dhexeeya xarfaha waa ka yar yahay inta u dhexeysa ereyada iyo meesha u dhexeysa ereyada waa ka yar tahay inta u dhexeysa xariiqyada. Si aad uga hesho akhrinta saxda ah mobilka, waa inaad fiiro gaar ah u lahaataa kala sarreynta boosaska, marka lagu daro qaabka jilayaasha ereyo, sadarro iyo sadarro, taas oo xitaa ka sii muhiimsan iftiinka dabiiciga ah.
Caadi ahaan, cabirka akhriska wanaagsan wuxuu ku saabsan yahay 65 oo xaraf. Dhererka jireed ee cabbirkan badanaa waxay kuxirantahay naqshadda nooca qoraalka iyo raadraaca, iyo sidoo kale qoraalka aad isticmaasho. Waa wax la yaab leh in 65 xaraf loo balaariyo cirifka biraawsarka desktop-ka, hase yeeshe, ku dhowaad dhammaan mobilada xarfahaas u janjeera inuu sifiican uga sii gudbo xadka, marka waa lagama maarmaan in la yareeyo cabirka.
Dabci oo adke
Haddii si xor ah loo sameeyo, meelaha u dhexeeya ereyada waxay bilaabaan inay saf galaan, kaasoo dhaliya waxa caadi ahaan loo yaqaan "webiyada".
Heerka dhaqameed ee kormeeraha wuxuu ku saabsan yahay 1.4em, in kastoo la rumeysan yahay tani waa mid aad ugu adag shaashadaha, Astaamaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'fonts' ee sida saxda ah ugu shaqeeya shaashadaha ayaa ah miisaamiyeyaal waaweyn, kuwaas oo waxay u baahan yihiin meel yar oo dheeri ah si loo ilaaliyo kala saraynta meelaha.
Raadi barta macaan
Ili kasta waxay leedahay ugu yaraan hal bar oo macaan, taas oo ah asal ahaan waa isku dhafka cabirka kaas oo inta badan sida ugu fiican loogu soo saaro shaashadda, iyo barta ay ka ladagaalanka codsatay biraawsarka waxay u egtahay inay qalloociso nooca nuuca sida ugu yar ee suurtogalka ah.
El Bar macaan, ficil ahaan waa barta ay inta badan istaroogyadu u muuqdaan inay la jaan qaadayaan qalabka pixel-ka. Guud ahaan, habka caadiga ah ee naqshadeeyayaasha ayaa ah in la dhigo nooca isha adoo adeegsanaya shabakad aasaasi ah, hase yeeshee markay timaado mobilada waxaad u baahan tahay isticmaal dherer "X" halkii, taas oo macno ahaan ah dhererka xarafka yar x.
Ha lumin dharkaaga
Calalku asal ahaan waa xadka sanduuqa qoraalka; guud ahaan waxa aan aqrinay waxay la jaanqaadeen dhanka bidix taasoo keeneysa in dhanka midig uu noqdo mid aan sinnayn. Marka indhuhu gees ka gees u boodaan oo gees kale u galaan sadarka qaar, maskaxdu waxay fursad u leedahay inay si fiican u xukunto xagal iyo masaafad u boodka xiga, haddii dhammaan boodbooyinku si joogto ah oo aad u dheereeya loo sameeyay haddii loo kala dheereeyo si isku mid ah. Tani waa sababta xadka bidix ee qoraalka had iyo jeer u leeyahay inuu ahaado mid fidsan, taasoo ka dhigaysa in khadadka oo dhan ay ka bilaabmaan si isku mid ah.
Markaad isticmaaleyso a qoraalka la caddeeyay Meelo is khilaafsan ayaa badanaa la sameeyaa. Dhibaatada ugu weyn ee qoraallada qiilka leh ayaa ah inay isticmaalaan dherer aad u gaaban, taasoo keeneysa in qoraalka ficil ahaan aan loo akhriyi karin taleefannada gacanta.
Iska yaree farqiga
Madaxa waxay noqon karaan 2 iyo xitaa 3 jeer cabirka jirka qoraalkaaga loogu talagalay desktops-yada, oo shaqeynaya maxaa yeelay waxaa jira qoraal aad uga badan shaashadda. Si kastaba ha noqotee, markay tahay moobiil, qoraalka oo dhan lama wada arki karo oo kala duwanaanshaha ayaa u muuqda mid aad loo buunbuuniyey.
Ku hagaaji raadinta miisaanka
Markaad hagaajineyso cabirka farta moobilka, waa inaad xisaabta ku darso isbeddelada looga baahan yahay dabagalka, taas oo asal ahaan u kala dheereysa xarafka lagu dabaqay mid kasta oo ka mid ah astaamaha font.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 7 xeerar fudud oo moobilka lagu qoro
Khiyaanooyinka Photoshop oo kaa caawin doona inaad hagaajiso cilladaha ku jira sawirradaada